सुदीप अभिनित ‘पहलवान’ को ट्रेलर सार्वजनिक
पुष्प खड्काले समेत ३०/३० लाख रुपैया पारिश्रमिक माग्न थालेपछि धेरै निर्माताहरु फिल्म बनाउन छाडेर पलायन हुने सोचमा छन् । जसको एउटा फिल्म हिट भएको छैन, अनि जसको तेस्रो फिल्म रिलिज भएको छैन । उनले नै त्यति धेरै पैसा माग्न थालेपछि निर्माताको सातो किन नजाओस् ?
मन बुझाउने अवार्ड
नम्रता सापकोटा उद्योगमा बेरोजगारजस्तै छन् । उनले न फिल्ममा काम पाएकी छन्, न म्युजिक भिडियोमा । अझ गरेका फिल्म बक्स अफिसमा असफल भएपछि त उनको काम पनि कतै नोटिस भएन ।
जब यी अभिनेत्रीले अजयलाई दोष लगाइन्
रातारात धनी, रातारात कंगाल
बलिउडमा सधैँ लक्जरी लाइफ भोग्न सजिलो छैन । केही अभिनेत्रीहरु बलिउडमा सफलता पाएसँगै लक्जरी लाइफमा व्यस्त रहे । तर, उनीहरुको करिअर एकाएक धरापमा परेपछि उनीहरु कंगाल हुन पुगेका थिए ।
सन्दर्भ आडलकोः वाउ.. लाग्ने कोही छैनन्– स्वास्तिमा खड्का
अभिनेत्री स्वास्तिमा खड्का भन्छिन्, ‘हाम्रो सबै सिनियर एक्ट्रेसहरुलाई मैले रेस्पेक्ट गर्छु । उहाँहरुको आ–आफ्नै स्थान छ । तर, मैले आइडल मान्ने एक्ट्रेसचाँही कोही पनि छैनन् । आइडल हुनका लागि सबै कुरा वाउ.. ओ माई गड, हुनुप–यो ।
एक करोड ८० लाखको पहिरनमा प्रियंका !
मुम्बई । बलिउड र हलिउडका कलाकारहरुले कति कमाउँछन् भनेर ठ्याक्कै अनुमान गर्न गाह्रो हुन्छ । कहिलेकाँही उनीहरुको खर्च देखेर फ्यान आश्चर्यचकित पर्छन् । यति बेला अभिनेत्री प्रियंका चोपडाका तस्वीर भाइरल बनेका छन् । उनी बिलबर्ड म्युजिक अवार्ड २०१९ मा सामेल हुदाका तस्वीरले चर्चा पाएको हो ।
तापसी ट्रोलको सिकार
बलिउड अभिनेत्री तापसी पन्नु आफ्नो बोल्ड अभिव्यक्तिका कारण पनि चर्चामा आइरहन्छिन् । हालै उनले एयर इन्डिया विरुद्ध दिएकी एक अभिव्यक्तिले तरंग ल्याएको छ ।